चिसो मौसममा यौन जीवन ! - Baikalpikkhabar
पार्टनरसँग टाँसिएर बस्नु, चुम्बन गर्नु त्योभन्दा पनि अघि बढ्नुको आनन्दै बेग्लै ।यो चिसोमा तपाईको यौन जीवनका लागि हामीले यहाँ केही उपाय दिएका छौ । जसको प्रयोगबाट तपाईले अझ आनन्द महशुस गर्नुहुनेछ । सेक्सका लागि तयार हुनु भनेको कपडाबाट टाडा हुनु हो। तर, पुस माघको यो चिसोमा कपडा खोल्नु आफैमा कुनै यातना भन्दा कम नहोला । यस्तो अवस्थामा तपाई पार्टनरलाई यौनप्रति रुची बढाउने प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ ।
चिसो निरन्तर बढ्दो छ । हुस्सु र शितलहरले घाम जमिनसम्म आउन निकै प्रतिक्षामा छ । यस्तो अवस्थामा तपाई छिप्पिदो चिसो र हुस्सुका बारेमा होइन, आफ्नो बेडरुमका बारेमा सोचिरहनु भएको होला । त्यसमाथि चर्को लोडसेडिङको मार । यस्तो अवस्थामा बेडरुमबाट बाहिर निस्कने विषयमा कमैले सोचेका होलान्। यो चिसोमा आफ्नो बेडरुमको कम्बलमा घुसिरहने इच्छा सबैमा हुन्छ नै।
यस्तो अवस्थामा कम्बल वा सिरकभित्र बेडमा रहन सबैलाई मनपर्छ। अझ यो अवस्थामा तपाईको पार्टनर पनि त्यही कम्बलभित्र हुने हो भने चिसो मौसम रोमान्सको मौसम बन्न सक्छ । पार्टनरसँग टाँसिएर बस्नु, चुम्बन गर्नु त्योभन्दा पनि अघि बढ्नुको आनन्दै बेग्लै ।यो चिसोमा तपाईको यौन जीवनका लागि हामीले यहाँ केही उपाय दिएका छौ । जसको प्रयोगबाट तपाईले अझ आनन्द महशुस गर्नुहुनेछ । सेक्सका लागि तयार हुनु भनेको कपडाबाट टाडा हुनु हो।
तर, पुस माघको यो चिसोमा कपडा खोल्नु आफैमा कुनै यातना भन्दा कम नहोला । यस्तो अवस्थामा तपाई पार्टनरलाई यौनप्रति रुची बढाउने प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ । पार्टनरको वार्डरोबमा केही परिर्वत गरेर पनि उत्तेजना बढाउन सकिन्छ। बेडमा वास्तविक एक्सनभन्दा पहिला रेड वाइनको ग्लासले तपाईको जित सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
रेड वाइन यस्तो अवस्थामा कामोत्तेजक औषधिको काम गर्न सक्छ । यो प्रमाणित भइसकेको छ कि रेड वाइनले यस्तो अवस्थामा कमालको असर देखाउँछ ।यसले तपाईलाई तातो राख्ने छ र तपाईले स्वर्णिम पलको भरपुर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ । चिसोको यो मौसममा तपाई दिनभर कार्यालयको कामबाट थाक्नु भएको छ भने आफ्नो यो थकानलाई यौन जीवनको भिलेन बन्न नदिनुस् । यद्यपि धेरै मानिस शावरलाई दुश्मन ठानेर नजिक जान पनि मान्दैनन् । तर जिसोयाममा यो निकै लाभदायक हुन सक्छ ।
यदि तपाई दिनभरको थकानबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने तातो शावर लिएर यसको कमाल अनुभूत गर्न सक्नु हुन्छ । तातो पानीले तपाईको थकान बगाउनेछ । तपाईलाई जीवनको महत्वपूर्ण क्षणका लागि एनर्जी पनि प्रदान गर्नेछ । भलै तपाईलाई मनपर्ने सुगन्धन कुन हो? चिसोको यो मौसममा उत्तम सुगन्ध भएको डियो वा कुनै परफ्युमले पनि तपाईको यो पललाई रोमाञ्चक बनाउनेछ । यसले तपाईमा एक प्रकारको अनौठो उत्तेजना उत्पन्न गराउनेछ। आफ्नो प्रेमिल क्षणमा डुब्नुअघि सुनिश्चित गर्नुस कि बेडमा ओछ्याइएको तन्ना सफा होस्। यद्यपि चिसोयाममा बेडरुमको तन्न, सिरिक आदि सफाचट राख्नु चुनौति नै हो।
तर, यस्तो नहोस कि त्यसको गन्धले मुड खराब गरोस् ।यद्यपी केही महिलाका लागि यो कुनै ठुलो कुरा होइन । तर, हट, वाइल्ड सेक्सका साथै अधिकांश महिला सामान्यतः बेडमा सबै कुरा सफा र स्वच्छ चाहन्छन् । त्यसैले भनिएको हो, सफा बेड फोहोस सेक्स । एजेन्सी
शुक्रबार, २१ मंसिर, २०७५, दिउँसोको १२:३२ बजे